Adeegga Macaamiisha Bulshada ee Suuqleyda | Martech Zone
Adeegga macaamiisha IS suuqgeynta. Mar labaad ayaan dhihi doonaa… adeegga macaamiisha IS suuqgeynta. Sababtoo ah sida aad ula dhaqanto macaamiishaada ayaa looga dallacsiiyaa baraha bulshada, qiimeynta iyo dib u eegista maalin kasta, adeeggaaga macmiil maahan mid tilmaam u ah qanacsanaanta, haynta ama qiimaha macaamiisha. Macaamiishaadu hadda waxay yihiin cudud muhiim u ah dhammaan dadaalada suuqgeyntaada maxaa yeelay si fudud ayey internetka ula wadaagaan.
In kasta oo Kooxaha Suuq geynta ay ujeedadoodu tahay kordhinta wacyiga sumadda iyo jiilka hoggaaminta iyada oo la riixayo macluumaadka lana abuurayo kaqeybgal wanaagsan, Kooxaha Adeegyada Macaamiisha ayaa ujeedkoodu yahay inay hagaajiyaan qanacsanaanta macaamilka ayna kordhiyaan sii-haynta macaamiisha iyagoo dhageysanaya, kana jawaabaya baahida macaamiisha. Sida labadooda u kulmaan waxaa badanaa loo arkaa inay caqabad ku yihiin ururo badan. Xigasho: Fartaada
Halka 60% ka mid ah shirkadaha ay rumeysan yihiin in warbaahinta bulshada ay tahay oo keliya kanaal suuqgeyn ah, hadana waxay iska indha tirayaan kordhinta sumaddooda illaa iyo inta laga gaarayo u doodeyaasha macaamilka ama ceebeeya. Dhammaan waxay u baahan tahay in lagu carqaladeeyo bilaha ama sannadaha shaqada adag ee kalsoonida, maamulka, iyo xiriirka shucuurta leh ee lala yeelanayo dhagaystayaashaada ayaa si xun u maareeya hal dhacdo oo lagu daabacay laguna dhiirrigeliyey warbaahinta bulshada. Si wax ku ool ah ayaad uga soo kaban kartaa… laakiin waa inaadan waligaa ilaawin adeegga macaamiishaas is hadda waa qayb muhiim ah oo ka mid ah istiraatiijiyadaada suuq geynta guud.
Tags: doodiddau doodAdeegga macaamiishadhaleecaynhayntau doodista bulshadaadeegga macaamiisha bulshada